Umaki: amagoli | Martech Zone
I-KISSmetrics ikhiphe uhlelo olusha lwamahhala le-iPhone olubizwa ngeMy Analytics. Kuyindlela esheshayo yokubona ukuthi amamethrikhi wakho we-Google Analytics asebenza kanjani uma ukude nedeski lakho. Ngasekuqaleni konyaka, abantu be-KISSmetrics babefuna uhlelo lokusebenza oluhloniphekile lwe-Google Analytics ukubasiza ukugcina amathebhu kudatha yabo. Futhi abakwazanga ukuyithola. Noma ngabe izinhlelo zokusebenza zeselula beZINGUQOBO kakhulu futhi bezingakuvumeli wenze ukuqhathanisa, noma